Ady amin’ny tsy fandriampahalemana :: Zandary fito amby dimampolo nogadraina, iraika amby dimampolo hafa miandry Fitsarana • AoRaha
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Zandary fito amby dimampolo nogadraina, iraika amby dimampolo hafa miandry Fitsarana
Fantatra teo anivon’ny Sekretariam-panja­kana miadidy ny Zandarimariam-pirenena na ny Seg fa tao anatin’ny valo volana lasa izay dia miisa fito amby dimampolo ireo zandary naiditra am-ponja vonjimaika. Ankoatra ireo, misy taratasy fahazoan-dalana manenjika zandary miisa iraika amby dimampolo noso­niavin’ny jeneraly Rava­lomanana Richard miandry ny fotoana hanolorana ireo zandary ireo ny Fitsarana.
“Tsy natao fieren’ny jiolahy ny Zandarimaria. Izay zandary voarohirohy amin’ny asan-jiolahy na fandikan-keloka hafa dia mivonona ny hatolotra ny Fitsarana izy izay”, hoy io tompon’andrai­kitra voalohany an’ny zanda­rimaria io.
Fandikan-dalàna maro isan-karazany no maha voarohirohy ireo zandary an-jatony ireo. Mahabe taraina ny olona any amin’ ireo toerana lalovan’ireo manampahefana, toy ny Praiminisitra sy ireo minisitra misahana ny fandriampaha­lemana ny fifandraisan’ireo
jiolahy amin’ireo mpitandro filaminana. Zava-misy koa ny mpitandro filaminana manao jiolahy mihitsy.
Ampahany amin’ireo tranga mahavoarohirohy ireo zandary ny fakàna an-keriny, fanafihana mitam-basy, halatr’ omby, varo-maizina fitaovam-piadiana, kolikoly, fanerena olona hanome vola, halatra lavanila, vono olona sy ny maro hafa. Na eo aza ny fanadiovana sy ny fepetra hentitra raisin’ireo lehiben’ny zandarimaria dia mbola misy hatrany ireo zandary manohy ny fomba ratsy fanao teo aloha.
Raha itsy tarehimarika avy amin’ny Seg itsy dia misy zandary manodidina ny telo ambin’ny folo eo ho eo voa­rohirohy amin’ny fandikan-keloka namoahan’ny Seg taratasy fahafahana manenjika, eny amin’ny Fitsarana. Tamin’ity herinandro ity dia nisy zandary roa no natolotra ny Fitsarana. Tamin’ny herinandro lasa nisy zandary iray naiditra am-ponja rehefa avy nosamborin’ny polisy misahana ny heloka bevava na ny BC, eny Ampefiloha. Voampanga ho nangalatra vidina lavanila milanja 31kg io zandary io, araka ny loharanom-baovao.
“Tsy azo ekena mihitsy ny mpitandro filaminana manao asan-jiolahy na miray tsikombakomba amin’ireny. Nisy ireo zandary tato aminay namoy ny ainy voatifitry ny jio­lahy. Rehefa nojerena ny bala nahafaty ilay zandary dia bala tato amin’ny Zandarimaria ihany. Namidin’ireo zandary tato ireo bala ireo ka nampiasain’ny jiolahy. Izany ve no fomba fisainan’ny olona mendrika homen’ny vahoaka ny fahatokisany hiaro azy sy ny fananany. Tsy lazaina intsony ny mahazo ny olona amin’ireny fanafihana mitam-basy sy asan-jiolahy isan-karazany ireny. Izaho manokana dia tsy misalasala mihitsy ary vao mainka ma­nampy tosika ny Fitsarana hanome vaovao fanampiny mba hampidirana am-ponja ny zandary toy izany”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Lozam-pifamoivoizana :: Zaza roa maty tamina fiara nifatratra tamin’ny vodihazo
Fisandohana sy fakana vola :: Pasitera sy olona dimy voarohirohy tamin’ny fisolokiana